Waa Kuwan SADDEXDA Weeraryahan Ee Ay Real Madrid Qorshaynayso Inay Dunida Ku Qabsato & Wakhtiga Ay Kusoo Biirayaan - Gool24.Net
Waa Kuwan SADDEXDA Weeraryahan Ee Ay Real Madrid Qorshaynayso Inay Dunida Ku Qabsato & Wakhtiga Ay Kusoo Biirayaan
Wargeyska ree Spain ee AS oo ka faalooday qorshayaasha mustaqbalka dhaw ee kooxda Real Madrid ayaa shaaca ka qaaday sida uu u ekaan doono safka weerarka ee kooxdaasi xagaaga dambe ee sanadka 2021.
Dabcan Los Blancos ayaa haatan haysta weeraryahano ay kamid yihiin Karim Benzema, Eden Hazard, Vinicius JR, Luka Jovic, Asensio, Rodrygo Goes iyo kuwo kale oo badan balse wargeyska ayaa sheegaya in Hazard uu baaqi kaga sii ahaan doono shaxda koowaad.
AS ayaa sheegaya in haddii rabitaanka Real Madrid uu sidiisa u hirgalo ay kooxdaasi safkeeda weerar ku midayn doonto Hazard, Erling Braut Haaland oo Borussia Dortmund ka tirsan iyo Kylian Mbappe oo Paris Saint-Germain muhiim u ah.
Mbappe ayaa xilli horeba ah mid kamida weeraryahanada ugu dilaasan qaarada Yurub wakhti xaadirkan halka Haaland uu xilli ciyaareedkan ahaa mid wacdarro kusoo muujiyay kooxdiisii hore ee RB Salzburg iyo Dortmund oo uu January ku biiray labadaba.
Warbixinta wargeyskan oo kasii faaloonaysa hanaanka uu tababare Zidane u adeegsan karo saddexleydan weerar ayaa sheegtay in Eden Hazard uu garabka bidix fuuli doono, Mbappe uu midka midig lahaan doono isla markaana uu Haaland weeraryahanka dhexe noqonayo.
Heshiiska uu Kylian Mbappe oo 21 sano jir ahi ku joogo PSG ayaa ah mid dhacaya sanadka 2022 sidaas darteed waxa suurogal ah in Paris ay isku daydo inay iibiso xagaaga dambe ee 2021 haddii uusan heshiis cusub saxeexin si aysan sanad kaddib bilaash ugu waayin.
Dhinaca kale qandaraaska Haaland ee Dortmund ayaa ah mid lagu jabin karo 65 Milyan oo Pound waana lacag usii muuqatay mid aad u raqiis ah marka la eego qaabka uu ku bilawday nolosha kooxda ree Germany.
Los Blancos ayaa ugu dambayn heli kara safka weerar ee ay raadinayeen tan iyo bixitaankii Cristiano Ronaldo kaas oo weerar xoogan lasoo samaystay Karim Benzema iyo Gareth Bale.